သတင်းကြေညာဖို့အတွက် လူအစား AI တွေကို အစားထိုးလိုက်တဲ့ ရှင်ဟွာသတင်းဌာန
10 Nov 2018 . 1:32 PM
သတင်းကြေညာတဲ့အလုပ်ဆိုတာ လွယ်တယ်လို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ ခက်ခဲပါတယ်။ အမှားမပါဖို့၊ အချိန်အကြာကြီး ပြောနိုင်ဖို့နဲ့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ပြောနိုင်ဖို့ဆိုတာ တကယ်ကို ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်ပါ။ အဲ့ဒီလို ပင်ပန်းပြီး ခက်ခဲတဲ့ အလုပ်နေရာအတွက် လူအစားထိုး AI သတင်းကြေညာသူကို သုံးဖို့ တရုတ်ပြည်က ရှင်ဟွာ (Xinhua) သတင်းဌာနက စီစဉ်လိုက်ပါပြီ။
Artificial Intelligence News Anchor လို့ခေါ်တဲ့ AI သတင်းကြေညာသူကို ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲ ပရိသတ်ကို ထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။ “Hello, you are watching English news program. I am AI news anchor in Beijing” ဆိုပြီး English ပိုင်း အစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်မှာ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Virtual သတင်းကြေညာသူက ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ Xinhua ကဆိုပါတယ်။
ဒီ AI သတင်းကြေညာသူကိုတော့ Xinhua နဲ့ တရုတ် Search Engine Company ဖြစ်တဲ့ Sogou တို့ ပူးပေါင်းပြီး ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောပြောနေတဲ့ လေသံအတိုင်းအနီးစပ်ဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားပြီး မျက်နှာအမူအရာတွေနဲ့ ကိုယ်အမူအရာတွေပါ သဘာဝကျအောင် ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတွေ့ရတဲ့ ဝတ်စုံပြည့်နဲ့ English သတင်းကြေညာသူကတော့ လူအစစ် Xinhua သတင်းကြေညာသူ Zhang Zhao ကိုပဲ Model ယူထားတာပါ။
Xinhua ရဲ့ကြေညာချက်အရတော့ AI က တခြား လူအစစ်တွေပြောထားတဲ့ Live သတင်း အစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ပြီး လေ့လာနိုင်သလို စာတွေကိုလည်း ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဝါရင့်သတင်းကြေညာသူတစ်ယောက်လို ကောင်းကောင်းဖတ်ပြနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခုလို AI ကိုသုံးလိုက်တာကြောင့် Webiste နဲ့ Social Media Platform တွေအတွက် သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအပိုင်းမှာ အကုအကျသက်သာသွားမှာဖြစ်သလို အရည်အသွေးပိုင်းမထိရောက်တိုးတက်မှုလည်း ပိုများလာမှာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သတင်းကြေညာတဲ့အလုပ်ဆိုတာ လူတွေအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါဦးမလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။
Ref: Engadget | CNN
သတငျးကွညောဖို့အတှကျ လူအစား AI တှကေို အစားထိုးလိုကျတဲ့ ရှငျဟှာသတငျးဌာန
သတငျးကွညောတဲ့အလုပျဆိုတာ လှယျတယျလို့ထငျရပမေယျ့ တကယျတမျးမှာတော့ ခကျခဲပါတယျ။ အမှားမပါဖို့၊ အခြိနျအကွာကွီး ပွောနိုငျဖို့နဲ့ တညျတညျငွိမျငွိမျနဲ့ ပွောနိုငျဖို့ဆိုတာ တကယျကို ပငျပနျးတဲ့အလုပျပါ။ အဲ့ဒီလို ပငျပနျးပွီး ခကျခဲတဲ့ အလုပျနရောအတှကျ လူအစားထိုး AI သတငျးကွညောသူကို သုံးဖို့ တရုတျပွညျက ရှငျဟှာ (Xinhua) သတငျးဌာနက စီစဉျလိုကျပါပွီ။
Artificial Intelligence News Anchor လို့ချေါတဲ့ AI သတငျးကွညောသူကို ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးကပဲ ပရိသတျကို ထုတျပွခဲ့ပါတယျ။ “Hello, you are watching English news program. I am AI news anchor in Beijing” ဆိုပွီး English ပိုငျး အစီအစဉျထုတျလှငျ့မှုအစီအစဉျမှာ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒီ Virtual သတငျးကွညောသူက ကမ်ဘာ့ပထမဦးဆုံးဖွဈတယျလို့ Xinhua ကဆိုပါတယျ။
ဒီ AI သတငျးကွညောသူကိုတော့ Xinhua နဲ့ တရုတျ Search Engine Company ဖွဈတဲ့ Sogou တို့ ပူးပေါငျးပွီး ဖနျတီးထားတာဖွဈပါတယျ။ လူတဈယောပွောနတေဲ့ လသေံအတိုငျးအနီးစပျဆုံးဖွဈအောငျ ဖနျတီးထားပွီး မကျြနှာအမူအရာတှနေဲ့ ကိုယျအမူအရာတှပေါ သဘာဝကအြောငျ ဖနျတီးထားတာဖွဈပါတယျ။ အခုတှရေ့တဲ့ ဝတျစုံပွညျ့နဲ့ English သတငျးကွညောသူကတော့ လူအစဈ Xinhua သတငျးကွညောသူ Zhang Zhao ကိုပဲ Model ယူထားတာပါ။
Xinhua ရဲ့ကွညောခကျြအရတော့ AI က တခွား လူအစဈတှပွေောထားတဲ့ Live သတငျး အစီအစဉျတှကေိုကွညျ့ပွီး လလေ့ာနိုငျသလို စာတှကေိုလညျး ကြှမျးကငျြတဲ့ ဝါရငျ့သတငျးကွညောသူတဈယောကျလို ကောငျးကောငျးဖတျပွနိုငျတယျလို့ သိရပါတယျ။ အခုလို AI ကိုသုံးလိုကျတာကွောငျ့ Webiste နဲ့ Social Media Platform တှအေတှကျ သတငျးထုတျလှငျ့မှုအပိုငျးမှာ အကုအကသြကျသာသှားမှာဖွဈသလို အရညျအသှေးပိုငျးမထိရောကျတိုးတကျမှုလညျး ပိုမြားလာမှာပါ။ နောကျပိုငျးမှာတော့ သတငျးကွညောတဲ့အလုပျဆိုတာ လူတှအေတှကျဖွဈနိုငျပါဦးမလားဆိုတာ စဉျးစားစရာပါပဲ။